တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ကချင်ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံကာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆွေးနွေး - News @ M-Media
Media To Monitor
Hate Crime စောင့်ကြည့်ရေး
ရိုဟင်ဂျာ ၇ ဦးကို အိန္ဒိယနိုင်ငံက မြန်မာကို ပထမဆုံးအကြိမ် ပြန်ပို့
ဓာတ်ပြားအဆိုတော် တေးသံရှင် ဒေါ်မာမာဝေ အသက်(၉၃) နှစ် ကွယ်လွန်
ဒုက္ခသည်စခန်းမှ လုပ်အားပေးဆရာမတစ်ဦး ရခိုင်မှ ရန်ကုန်သို့လာစဉ် လဝကဥပဒေဖြင့် အဖမ်းခံရပြီး ထောင်တစ်နှစ်ကျ
ဦးဇော်ဌေး (ခ) မှူးဇော်အား ဌာနပြောင်းရွှေ့တာဝန်ပေး
NVC ကဒ် လက်ခံရန် ဖိအားပေးခံရမှုကို ငြင်းဆိုသော ကမန်တိုင်းရင်းသားများ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့ခံနေရ
ASEAN ထိပ်သီးများ ရိုဟင်ဂျာအရေး ဆွေးနွေး
Drone မှုနဲ့ဖမ်းခံရသူ သတင်းထောက်တွေ မိသားစုနဲ့တွေ့ခွင့်မရသေး
မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် သဘောတူညီချက် (၁၀)ချက် လက်မှတ်ရေးထိုး
AA ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အပါအ၀င် ၉ ဦးကို ငွေကြေးခ၀ါချမှုနဲ့ အမှုဖွင့်စစ်ဆေး
ဘာသာပေါင်းစုံ ဆုတောင်းပွဲ (ရုပ်သံ)
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် ကချင်ခေါင်းဆောင်များ တွေ့ဆုံကာ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဆွေးနွေး
in မြန်မာသတင်း — February 6, 2019
ဖေဖော်ဝါရီ ၆၊ ၂၀၁၉
ကချင်ခေါင်းဆောင်များနှင့်အတူ တွေ့ရသည့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး (Photo Credit – ဧရာဝတီ)
– မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ဟာ ကချင်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အင်္ဂါနေ့မှာ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေ နေရပ်ပြန်ရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ မြစ်ဆုံဆည်ကိစ္စတွေကို ဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
စစ်တပ်ရဲ့ မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်အဆောက်အဦးမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အဲဒီဆွေးနွေးမှုကို ကချင်နှစ်ခြင်းအသင်းတော် (KBC) ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ ကချင်ကက်သလစ်လူ့အဖွဲ့အစည်းက ခေါင်းဆောင်တွေ တက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက ကချင်စစ်ရှောင်တွေ နေရပ်ပြန်ရေးကိစ္စ၊ ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုကိစ္စတွေကို လျင်လျင်မြန်မြန်နဲ့ တိုးတက်မှုရှိအောင် ဆောင်ရွက်ချင်ကြောင်း၊ မြစ်ဆုံကိစ္စဟာ ပြည်သူ့ဆန္ဒနဲ့ လွှတ်တော်ရဲ့ အဆုံးအဖြတ်အပေါ်မှာ မူတည်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
KBC က ရေရှည်ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရည်ရွယ်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်မျိုးကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိ ဆောင်ရွက်ဖို့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့၊ လူထုအခြေပြု အဖွဲ့တွေနဲ့ ပူးပေါင်းကာ နေရပ်ပြန်စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေ လုံခြုံရေး ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
“(ဒီကိစ္စကို) ကျွန်တော်တို့နဲ့သာ မဆွေးနွေးဘူးဆိုရင် တစ်ခုခုမှားသွားတာနဲ့ ပြည်သူလူထုက နောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးကို ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ KBC ဒုတိယဥက္ကဌ Tu Mai က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
KBC ဟာ လူသားချင်း စာနာမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့ Kachin Humanitarian Concern Committee ကို ဖွဲ့စည်းကာ စစ်ရှောင်ပြည်သူတွေအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။ Tu Mai က စစ်တပ်အနေနဲ့ ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ KIO အပါအ၀င် အဖွဲ့အစည်းအားလုံးနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေနွေးဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အစိုးရစစ်တပ်ဟာ ကချင်စစ်ရှောင်ပြည်သူ ၁၀၀ ကျော်ကို ၀ိုင်းမော်မြို့နယ်က သူတို့ရဲ့နေအိမ်တွေမှာ မကြာသေးခင်ကပဲ နေရာ ချထားပေးခဲ့ပါတယ်။
မြစ်ကြီးနား ကက်သလစ်သာသနာ့နယ်မြေရဲ့ လူမှူဖူလှုံရေးကိစ္စကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေတဲ့ ဖာသာ Noel Naw Lat က ကချင်ပြည်နယ်မှာ မြေမြှုပ်မိုင်းဖယ်ရှားရေး၊ စစ်ရှောင်စခန်းတွေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေ ဆောင်ရွက်ရေး ကူညီပေးသွားမယ်လို့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက ကတိပေးခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
မြစ်ဆုံကိစ္စကို ကချင်ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးက ကန့်ကွက်ကြောင်း ရေးသားထားတဲ့ ပေးစာတစ်စောင်ကို ကချင်ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်တွေက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးထံ ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဖာသာ Noel Naw Lat က မြစ်ဆုံစီမံကိန်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်ကွက်ကြောင်း အစည်းအဝေးမှာ တင်ပြခဲ့တယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
“သူ (ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး) က ပြည်သူ့ဆန္ဒကို မျက်ကွယ်ပြုဖို့ ခက်ခဲတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပြီး တပ်မတော်ဖက်က တတ်နိုင်သလောက် လုပ်ဆောင်ပေးမယ်လို့လည်း ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချက်ကို လွှတ်တော်က လုပ်ဆောင်ရမှာပါ”
ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုမှာ တိုးတက်မှုကို မြင်ချင်ပြီး ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှု ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ အစည်းအဝေးမှာ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးရဲ့ ကချင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်ကို အင်္ဂါနေ့ညနေပိုင်းအထိ တပ်မတော်ဖက်က သတင်းမထုတ်ပြန်ပါဘူး။
(ဧရာဝတီသတင်းဌာန အင်္ဂလိပ်ပိုင်းမှသတင်းကို ကောက်နှုတ်ပြန်ဆိုပါသည်)
Tags: Kachin State, Minority In Myanmar, Myanmar Military
သတင်း အသစ်များကို နေ့စဉ် Email မှ ရယူရန်
လုပ်ဆောင်ချက် အသစ်များ ပါဝင်သည့် M-Media Android App Version အသစ်
ထိုမ်ဝမ်ကို F-16 အစီး ၆၀ ကျော် အမေရိကန် ရောင်းမည်
ရေကြီးမြေပြိုမှုကြောင့် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း လူ ၂ သိန်း အိုးအိမ်စွန့်ခွာခဲ့ရ
ကက်ရ်ှမီးယားကိစ္စကို နိုင်ငံတကာတရားရေးရုံးသို့ ပါကစ္စတန် တိုင်ကြားမည်
ဝီဂါကိစ္စ တရုတ်ကိုထောက်ခံသည့်နိုင်ငံစာရင်းမှ ကာတာ နှုတ်ထွက်
Mr WordPress: Hi, this isacomment.To deleteacomment, just log in and v…
mgoakker: PEACE BE UPON YOU, I like Ko Then Min Htike's features. :)…
Mirror: ““လူသားအားလုံးဟာ တစ်�…
Nay Paing Oo: ဟုတ်တယ်ဗျ။ ကျနော်လဲ အ�…
arrow: သူပြုခဲ့တဲ့ ကောင်းမူ�…
Afghanistan anti_Muslim_in_Myanmar Bangladesh Champions League China DailySportNews DailySportsNews Egypt EPL EPL 2015-16 EPL 2016-2017 featured India indonesia international short news Iran iraq Israel Japan LaLiga malaysia Man U Minority In Myanmar north korea opinion Pakistan Palestine Philippines PremierLeague Rakhine State Real Madrid Rohingya russia SaudiArabia ShortNews singapore South Korea Syria thailand turkey UAE UK US US Muslims Yangon
Categories Select Category Advertising (5) Dubai (1) EDITORIAL (14) English Version (45) M-Media Blog (113) ကဗျာ (77) အစ္စလာမ်အေးရိပ် ဆာယာသို့ (18) M-Media Movies Guide (2) M-Media စာအုပ်စင် (23) M-MediaNewsLetters (15) Media To Monitor (116) Hate Crime စောင့်ကြည့်ရေး (26) ပြည်တွင်း (26) Our Perspectives (95) Uncategorized (2) ကမ္ဘာ့ နိုင်ငံများနှင့် ကိုးကွယ်ရာ ဘာသာ (19) ကျန်းမာရေးနှင့်ဆေးပညာ (285) ထင်ပေါ်ကျော်ကြား ပုဂ္ဂိုလ်များ (210) ထူးချွန်လူငယ် (16) ရဲဘော်ကိုထွေး (6) ဦးရာဇတ် (23) ပညာရေး (91) မိုးလေ၀သ (4) ရင်ဖွင့်လွှာ (3) သတင်းများ (16,175) Analysis (7) Interview (146) Weekly News (2) ကမ္ဘာ့မွတ်စလင် သတင်းများ (1,352) ကာတွန်း (50) ဓါတ်ပုံသတင်း (92) ရုပ်သံသတင်း (62) သတင်းသုံးသပ်ချက် (2) သတင်းဆောင်းပါး (136) သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ (500) သူ့အမြင် (220) အားကစား (2,588) ဆောင်းပါးရှင် အာဘော် (18) ပြည်သူ့အသံ (23) မြန်မာသတင်း (3,930) နိုင်ငံတကာသတင်း (8,036) အာဖရိက (395) အာရှ-ပဖိဖိတ် (2,438) အမေရိက (951) အရှေ့အလယ်ပိုင်း (1,849) ဥရောပ (901) သုတ၊ရသနှင့်အထွေထွေ (1,379) Essay (1) M-Media Knowledge (26) Quote (16) ကမ္ဘာကျော် မွတ်စလင်များ (127) ကမ္ဘာကျော်မွတ်စလင် အားကစားသမားများ (30) ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ရပ် (6) စာတမ်း (5) ဘာသာပြန် (161) ရသစာပေ (4) ဝတ္ထုတို (6) သုတ၊ရသ (56) သရော်စာ (29) ဆောင်းပါး (870) ထွေရာလေးပါး (84) ပေးစာ/ပြန်စာကဏ္ဍ (26) ကြေငြာချက် (59) နှလုံးသားအာဟာရ (29) သူတို့ပြောသမျှ သူတို့အကြောင်း (2) အမှားပြင်ဆင်ချက် (2) အနုပညာ (2) မြန်မာမွတ်စ်လင်မ်သမိုင်း (52) Kaman (1) Masjid In Myanmar (1) သမိုင်းထဲက ပုံရိပ် (17)
ဝမ်းနည်းဖွယ် သီရိလင်္ကာအကြမ်းဖက်မှုနှင့် ဘာသာရေးအမည်ခံ အစွန်းရောက် အန္တရာယ်
သွေးနဲ့ အမုန်းတွေကို မိတ်ကပ်ဖို့ နေတဲ့ UAE (သူအမြင်)
“အစ္စလာမ့် ယဉ်ကျေး လိမ္မာသင်ရိုး မြန်မာမှုပြုရေး – ဖိနှိပ်မှုလား အခွင့်အလမ်းလား”
လူငယ် ၊ လူလည် (ကာတွန်း)
လူငယ်တွေ မရှိတဲ့ဘက်မှာ နေပါရစေ (ကာတွန်း)
“အမှားနဲ့ တရား” (ကဗျာ)
“၂၁-ပင်လုံ မြန်မာ့ဂုဏ်” (ကဗျာ)
“NV Card နှင့် သမိုင်းဝှက်ဖဲ” (ကဗျာ)
M-Media Android app အကြောင်း အသေးစိတ်ဖတ်လိုလျှင်
Archives Select Month August 2019 (40) July 2019 (88) June 2019 (75) May 2019 (85) April 2019 (85) March 2019 (76) February 2019 (99) January 2019 (78) December 2018 (76) November 2018 (77) October 2018 (128) September 2018 (122) August 2018 (126) July 2018 (155) June 2018 (119) May 2018 (151) April 2018 (156) March 2018 (141) February 2018 (125) January 2018 (131) December 2017 (148) November 2017 (162) October 2017 (215) September 2017 (200) August 2017 (210) July 2017 (209) June 2017 (201) May 2017 (196) April 2017 (205) March 2017 (203) February 2017 (211) January 2017 (245) December 2016 (235) November 2016 (276) October 2016 (265) September 2016 (244) August 2016 (252) July 2016 (242) June 2016 (290) May 2016 (242) April 2016 (254) March 2016 (283) February 2016 (284) January 2016 (329) December 2015 (341) November 2015 (358) October 2015 (417) September 2015 (303) August 2015 (277) July 2015 (268) June 2015 (293) May 2015 (302) April 2015 (238) March 2015 (266) February 2015 (260) January 2015 (282) December 2014 (262) November 2014 (255) October 2014 (273) September 2014 (226) August 2014 (233) July 2014 (246) June 2014 (217) May 2014 (249) April 2014 (280) March 2014 (264) February 2014 (255) January 2014 (326) December 2013 (291) November 2013 (257) October 2013 (255) September 2013 (203) August 2013 (233) July 2013 (233) June 2013 (206) May 2013 (172) April 2013 (114) March 2013 (153) February 2013 (70) January 2013 (96) December 2012 (101) November 2012 (130) October 2012 (168) September 2012 (82) August 2012 (118) July 2012 (93) June 2012 (76) May 2012 (53) April 2012 (31) March 2012 (24) February 2012 (8) January 2012 (13) December 2011 (19) November 2011 (10) October 2011 (11) September 2011 (12) August 2011 (33) July 2011 (28) June 2011 (7) May 2011 (15) April 2011 (9) March 2011 (8) February 2011 (12) January 2011 (15) December 2010 (16) November 2010 (21) October 2010 (29) September 2010 (30) August 2010 (4)
M-Media on Twitter
Copyright © 2019 — News @ M-Media. All Rights Reserved. Designed by WPZOOM